လူနှဈယောကျရရှေညျလကျတှဲခငျြတဲ့အခါ ခဈြတတျဖို့လိုပါတယျ – Shinyoon
ရစေကျရှိလို့ကွုံရတဲ့လူနှဈယောကျ တှဆေုံ့ပွီးသှားလို့လမျးခှဲခွငျးတှေ မလိုခငျြတော့တဲ့အခါ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျခဈြတတျဖို့လိုပါတယျ ။ မိနျးကလေးဘကျကလဲ နားလညျမှုရှိပေးဖို့လိုသလို ယောကျြားလေးဘကျကလဲ ခဈြတတျဖို့လိုပါတယျ ။
အမှနျအတိုငျးပွောရရငျ သူစိမျးနှဈဦးလေ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ စိတျခငျြးလဲမတူတဲ့ သူစိမျးနှဈဦး တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ရရှေညျလကျတှဲသှားဖို့ဆိုရငျ . . .တျောတျောလေးကို မလှယျတဲ့ အရာပါ ။ ဒါပမေယျ့ မဖွဈနိုငျဘူးဆိုတာတော့ မဟုတျပါဘူး ။
တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ခဈြလှနျးလို့ပါဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျအောကျမှာ ပွတျစဲသှားတဲ့သူတှလေဲ အမြားကွီးပါ ။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မခဈြဘူးလားဆိုရငျ တကယျကို ခဈြကွပါတယျ ဒါပမေယျ့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ နားလညျပေးဖို့သတိမရကွဘူး ။ အဲ့လို အတှဲက အဆငျပွနေတေဲ့အခါ အရမျးကိုပြျောစရာကောငျးပါတယျ ဒါပမေယျ့ တဈယောကျကို အဆငျမပွဖွေဈနတေဲ့အခါ စိတျညဈစရာဖွဈသှားတတျတယျ ။ ခဈြပဲခဈြတတျခဲ့တာလေ နားလညျဖို့သတိမရကွဘူး ။
နောကျကတဈမြိုးက ခဈြသငျ့သလောကျလဲ ခဈြတယျ နားလညျမှုရှိသငျ့သလောကျလဲ ရှိပမေယျ့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မယုံကွညျရဲကွဘူးပေါ့ ဒီနှဈယောကျကတော့ ပြျောဖို့ဆိုတာထကျ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ စှပျစှဲပွီး ရနျဖွဈနရေတာပဲ မြားပါတယျ ။ ပြျောစရာတှကေ ရှားတယျ တကယျတော့ ခဈြပမေယျ့ မယုံကွညျရဲတဲ့အခါ ဖွဈတတျတဲ့ အရာတှပေေါ့ ။
အခဈြတဈခုမှာ ပြျောရှငျခငျြတယျ ရရှေညျ လကျတှဲခငျြတယျ ဆိုရငျ . . .ခဈြတတျဖို့လိုပါတယျ ။ ဘယျလိုခဈြရမလဲဆိုရငျတော့ . . . ကိုယျ့ဘကျက ခဈြသငျ့သလောကျလေးပဲ ခဈြပွီး တားသငျ့သလောကျလေး တားတတျရတယျ ။ ကိုယျ့ဘကျက အဆုံးစှနျထိ ခဈြပွီး အရာအားလုံးကို အလြော့ပေးအလိုလိုကျခဲ့ရငျ နောငျတဈခြိနျ သငျအလိုမလိုကျနိုငျတော့တဲ့အခါ သူ့ကို အရငျလို မခဈြတော့ဘူးဆိုတဲ့ အထငျရောကျသှားတတျတယျလေ ။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ပှငျ့လငျးပွီး တဈယောကျပွသနာ တဈယောကျ နားထောငျပေးတတျဖို့လဲ လိုတယျ ။ အဲ့တာမှသာ အျော သူဒီလိုအဆငျမပွနေတောပဲ ဆိုပွီး တဈဖကျကဆငျခွငျသငျ့ ဆငျခွငျလို့ရမယျ အားပေးသငျ့ အားပေးလို့ရမယျလေ ။
မယုံကွညျဘူးဆိုရငျတော့ရှဆေ့ကျပွီး လကျမတှဲတာ အကောငျးဆုံးပဲ ရရှေညျလကျတှဲဖို့တှေးထားရငျတော့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ယုံသငျ့သလောကျ ယုံကွညျပေးဖို့လိုအပျတယျလေ ။ သူ ငါ့နောကျကှယျမှာ ဖောကျပွနျနမှောလားဆိုတဲ့အတှေးက အရမျးကို နာကငျြဖို့ကောငျးသလို သံသယတှေ ရှိလာတဲ့အခါ နှဈယောကျသား မကျြနှာခငျြးဆိုငျရှငျးတတျတဲ့အကငျြ့လေးကို မှေးပါ ။ သံသယဆိုတာ ထိနျခနျြထားတာမြားရငျ နောကျပိုငျး ပွသနာတှေ ပိုမြားတတျတယျလေ ။
လူနှဈယောကျရရှေညျလကျတှဲခငျြတဲ့အခါ ခဈြတတျဖို့လိုပါတယျ ။
ရေစက်ရှိလို့ကြုံရတဲ့လူနှစ်ယောက် တွေ့ဆုံပြီးသွားလို့လမ်းခွဲခြင်းတွေ မလိုချင်တော့တဲ့အခါ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ချစ်တတ်ဖို့လိုပါတယ် ။ မိန်းကလေးဘက်ကလဲ နားလည်မှုရှိပေးဖို့လိုသလို ယောက်ျားလေးဘက်ကလဲ ချစ်တတ်ဖို့လိုပါတယ် ။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် သူစိမ်းနှစ်ဦးလေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စိတ်ချင်းလဲမတူတဲ့ သူစိမ်းနှစ်ဦး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရေရှည်လက်တွဲသွားဖို့ဆိုရင် . . .တော်တော်လေးကို မလွယ်တဲ့ အရာပါ ။ ဒါပေမယ့် မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်လွန်းလို့ပါဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ပြတ်စဲသွားတဲ့သူတွေလဲ အများကြီးပါ ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မချစ်ဘူးလားဆိုရင် တကယ်ကို ချစ်ကြပါတယ် ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်ပေးဖို့သတိမရကြဘူး ။ အဲ့လို အတွဲက အဆင်ပြေနေတဲ့အခါ အရမ်းကိုပျော်စရာကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်ကို အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အခါ စိတ်ညစ်စရာဖြစ်သွားတတ်တယ် ။ ချစ်ပဲချစ်တတ်ခဲ့တာလေ နားလည်ဖို့သတိမရကြဘူး ။
နောက်ကတစ်မျိုးက ချစ်သင့်သလောက်လဲ ချစ်တယ် နားလည်မှုရှိသင့်သလောက်လဲ ရှိပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မယုံကြည်ရဲကြဘူးပေါ့ ဒီနှစ်ယောက်ကတော့ ပျော်ဖို့ဆိုတာထက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စွပ်စွဲပြီး ရန်ဖြစ်နေရတာပဲ များပါတယ် ။ ပျော်စရာတွေက ရှားတယ် တကယ်တော့ ချစ်ပေမယ့် မယုံကြည်ရဲတဲ့အခါ ဖြစ်တတ်တဲ့ အရာတွေပေါ့ ။
အချစ်တစ်ခုမှာ ပျော်ရွှင်ချင်တယ် ရေရှည် လက်တွဲချင်တယ် ဆိုရင် . . .ချစ်တတ်ဖို့လိုပါတယ် ။ ဘယ်လိုချစ်ရမလဲဆိုရင်တော့ . . . ကိုယ့်ဘက်က ချစ်သင့်သလောက်လေးပဲ ချစ်ပြီး တားသင့်သလောက်လေး တားတတ်ရတယ် ။ ကိုယ့်ဘက်က အဆုံးစွန်ထိ ချစ်ပြီး အရာအားလုံးကို အလျော့ပေးအလိုလိုက်ခဲ့ရင် နောင်တစ်ချိန် သင်အလိုမလိုက်နိုင်တော့တဲ့အခါ သူ့ကို အရင်လို မချစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ အထင်ရောက်သွားတတ်တယ်လေ ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပွင့်လင်းပြီး တစ်ယောက်ပြသနာ တစ်ယောက် နားထောင်ပေးတတ်ဖို့လဲ လိုတယ် ။ အဲ့တာမှသာ အော် သူဒီလိုအဆင်မပြေနေတာပဲ ဆိုပြီး တစ်ဖက်ကဆင်ခြင်သင့် ဆင်ခြင်လို့ရမယ် အားပေးသင့် အားပေးလို့ရမယ်လေ ။
မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့ရှေ့ဆက်ပြီး လက်မတွဲတာ အကောင်းဆုံးပဲ ရေရှည်လက်တွဲဖို့တွေးထားရင်တော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ယုံသင့်သလောက် ယုံကြည်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လေ ။ သူ ငါ့နောက်ကွယ်မှာ ဖောက်ပြန်နေမှာလားဆိုတဲ့အတွေးက အရမ်းကို နာကျင်ဖို့ကောင်းသလို သံသယတွေ ရှိလာတဲ့အခါ နှစ်ယောက်သား မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှင်းတတ်တဲ့အကျင့်လေးကို မွေးပါ ။ သံသယဆိုတာ ထိန်ချန်ထားတာများရင် နောက်ပိုင်း ပြသနာတွေ ပိုများတတ်တယ်လေ ။
လူနှစ်ယောက်ရေရှည်လက်တွဲချင်တဲ့အခါ ချစ်တတ်ဖို့လိုပါတယ် ။
မဖွဈနိုငျတဲ့အရာကွီးကို မြှျောလငျ့နတေယျဆိုတာ ကွားလို့ပဲကောငျးတာ ခံစားလို့မကောငျးဘူး